Ity farihy mahatalanjona ao Provence ity dia mety tsara amin'ny filomanosana fahavaratra sy fampangatsiahana, ary koa paradisa an-tongotra. Misy 1500 lalana ho an'ireo mpihanika mafana fo maniry maniry hidera ity fahagagana eropeana ity etsy ambony. Noho izany, misafidy ianao raha ianao te handro amin'ny masoandro fotsiny ambony sambo, na mahita an-tongotra.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao hahita ny fomba hahatongavanao amin'ny lamasinina mankany amin'ireo fahagagana voajanahary ireo.
Te hampiditra ny bilaoginay “Fahagagana voajanahary 5 tsara indrindra any Eropa” amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
naturalwonder voajanahary naturalwonderseurope Train Travel traintravelaustria traintravelfrance traintravelgermany